लाइब्रेरीमा देख्न थालेको धेरै भयो। पहिला अाँखा जुध्थे, मुस्कान साटिन्थे, बेलाबखत किताब नि साटिन्थे। तर, बिस्तारै आँखा जुधाइसँगै ‘रमाइलो अप्ठ्यारो’ साटिन थालेझैँ लाग्छ। सुन न !
सीधै सोधिहाल्ने हिम्मत छैन। कोसिस पनि नगरेको होइन, तिमीसँग बोल्न। साथीसँग झग’डा गरी–गरी क्यान्टिनको लाइनमा कि त तिमीअगाडि कि त पछाडि पर्थें म। तर, तिम्रो अगाडि हँुदा तिमीले साथीभाइसँग गरेका कुरामा लट्ठ पर्दै पछाडि फर्किन बिर्सन्थेँ र तिमी अगाडि परेको दिन तिमीले रोजेका परिकारको हेक्का राख्दाराख्दै तिमी भीडमा हराइसकेका हुन्थ्यौ। राजमाको तरकारी भएको दिन ठूलो कचौरा रोज्थ्यौ। खिर पाकेको दिन सिर्फ आलुको सब्जीले टाथ्र्यौ। अब त अनुहारका भावजस्तै खान्कीका चाहमेत अनुमान गर्न सक्ने भइसकेकी थिएँ।
मलाई पनि रिस उठेथ्यो, आफ्ना संवे’गहरूप्रति, जसले मलाई जुरुक्क उठेर हिँड्नबाट रोकेथे, मानौँ, खुट्टा पक्रेर राख्न चाहन्थे त्यहीँ, तिमीसँगै।
तिमीलाई आफ्नो एकान्त संसारमा अरू कसैले हस्तक्षेप गरेकाले रि’स उठ्यो होला र जब’र्जस्ती मुस्कुराउँदै आएर छेउमा बस्यौ। मलाई पनि रिस उठेथ्यो, आफ्ना संवे’गहरूप्रति, जसले मलाई जुरुक्क उठेर हिँड्नबाट रोकेथे, मानौँ, खुट्टा पक्रेर राख्न चाहन्थे त्यहीँ, तिमीसँगै।
अनि अझ रिस उठ्यो त्यो संवेगप्रति, जो तिमीसँग बोल्न चाहन्थ्यो र मलाई भनायो– ‘अस्ति माइकल फुको पढ्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईं। वस्तु र भावमा कुन महŒवपूर्ण ठान्नुहुन्छ ?’ …आफ्नै शब्दबाट स्त’ब्ध थिएँ म, जब तिमीले उल्टै प्रश्न गरेथ्यौ– ‘तिमीलाई के लाग्छ ?’
लाइब्रेरीमा मलाई पाँच सेकेन्डभन्दा बढी नियाल्ने हिम्मत गर है ! अनि त्यो दिन क्यान्टिनको तिम्रो टेबलमा बसी तिम्रा अनुहारका रङसँगै विचारका रङ पनि पढ्ने प्रयत्न गर्नेछु।
मोडलिङमा सुशील श्रेष्ठ र रुबिना थापा। तस्बिर : कुबेर ड्रंगोल/अन्नपूर्ण सम्पूर्ण
(यो पत्र ‘अन्नपूर्ण सम्पूर्ण’ले आयोजना गरेको ‘सम्पूर्ण प्रेमपत्र प्रतियोगिता’को उत्कृष्ट प्रेमपत्र हो।)